Ingxelo emfutshane malunga namathuba okutyala imali kwezolimo eNigeria
uJanuwari 09, 2017 by Chimezie, Iimbono zizonke:
Amandla ezolimo eNigeria akacofwa kwaye oku kuchaza ukungakwazi kwelizwe ukufezekisa iimfuno ezandayo zemveliso yezolimo. Icandelo lezolimo lihlala lingumqeshwa obalaseleyo wabasebenzi, oko kuvula iifestile zamathuba otyalo-mali. Ngaphezulu kweehektare ezingama-84 ezigidi zomhlaba olimekayo, amanzi amaninzi kunye nabasebenzi, iNigeria inokuba ngumdlali ophambili kwiintengiso zokutya zehlabathi nakwiimalike zezolimo.
Akusezindaba zangoku ukuba iNigeria ikhoyo ngoku, nto leyo yenza ukuba urhulumente kunye nobuchule kwezoqoqosho baphendukele kwezolimo ezaziphambili kuqoqosho lwelizwe ngaphambi kokufunyanwa kweoyile emdaka.
Kukho izizathu ezivakalayo ukuba iNigeria iyindawo yezolimo, kwaye ukuqonda ezi zizathu kuya kunceda naliphi na usomashishini elinobuzaza, umfuyi kunye nezolimo (nokuba zivelaphi) ukuba bacinge nzulu malunga nokuseta okanye ukufumana ifama eNigeria.
Alikho ilizwe laseAfrika apho umsebenzi wokulima ufumaneka ngokuthelekisa iNigeria ngokubhekisele kwimveliso nakwingeniso. Indawo endihlala kuyo ndodwa eNigeria ndingondla urhulumente.
Izizathu zokuba ukufuya eNigeria kuyinto engenakuphikiswa
1. INigeria inabemi abakhulu abangaphezu kwezigidi ezili-150, abantu abaphindwe kabini kunabantu baseZimbabwe naseMzantsi Afrika badibeneyo. Bonke abantu baseNigeria baxhomekeka kukutya okuvelayo okwenziwa ziifama kunye nezinye iifama kwimveliso yabo yokutya yemihla ngemihla kunye nesondlo- kwaye ngaphezulu kweepesenti ezingama-80 zabantu baseNigeria bathenga iMveliso yabo yeFama kwintengiso.
2. INigeria inezigaba ezikhulu kakhulu zomhlaba otyebileyo weefama ezibekelwe ukubanjiswa. Indawo yeNigeria yoMhlaba xa ilinganiselwa kwi-sq km malunga ne-910,770. Umda woMhlaba walo naliphi na ilizwe yindawo yelizwe liphela, ngaphandle kweendawo ezithathwa njengemizimba yamanzi. Ke, iNigeria inesinye sezona ndawo zinkulu zeLizwe e-Afrika apho iipesenti ezingama-70 ziyafumaneka ngokuLima.
3. Abemi baseNigeria banamandla aphezulu okuthenga - sithenga izinto apha kwaye sibhatala imali!
4. Ukulima eNigeria ayisiyomali yangaphandle eyamkela ilizwe, kodwa notyalo mali nayo.
5. Ezolimo eNigeria zivula amathuba ngakumbi kumtyali mali.
Ngaphaya koko, kukho imimandla eyahlukeneyo apho umtyali mali unokucofa kuyo;
· Ukuvunwa: umbona, irayisi, icassava, i-yam njl.
· Isityalo somthi: ioyile yesundu, cocoa njl.
· Iziqhamo kunye nemifuno: Iapinape, iitumato, imifuno njl.
· Imfuyo kunye nezokuloba.
Okokugqibela kukho iifama ezinkulu zabucala zabucala ezifumanekayo zokuqeshisa kunye nokuthengwa ngokuthe ngqo, kunye namanyathelo okuqala kwezolimo.
Ezolimo eNigeria zivula amathuba ngakumbi kumtyali mali. Amandla ezolimo eNigeria akacofwa kwaye oku kuchaza ukungakwazi kwelizwe ukufezekisa iimfuno ezandayo zemveliso yezolimo.
4.5 (89.09%) 11 iivoti
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Iimarike zezolimo, Imveliso yezolimo, Icandelo lezolimo, Ezolimo eNigeria, Umhlaba olimekayo, Ukulima eNigeria, Utyalomali kwezolimo, Amathuba oTyalo-mali, Umhlaba e-Afrika. Bookmark le Permalink.
Ngamana 3, 2016 Ukugcina imali kwiLog yeKhaya Ithunyelwe ngu: Jan Burmistroff Wonke umtyali mali unexhala malunga nokhuseleko lotyalo mali lwakhe. Ufuna ukuqinisekisa ukuba akukhathaleki nokuba kwenzeka ntoni kwezoqoqosho utyalomali lukhuselekile. Kule meko, uya kufuna ukuqiniseka ukuba ubeka, iindlela ngeendlela zokufumana naluphi na ukothusa oluya kuvelisa uqoqosho. Kula maxesha esiphithiphithi soqoqosho, xa isitokhwe siqala ukungazinzisi kwaye iinkampani zisilela, kuye kwakho ukukhetha ukubeka imali kwi-real estate. Ku […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Julayi 29, 2016 Amanqaku obambiso lwaBucala: Yintoni ekufuneka uyazi Ukujonga kutshanje kwinkxaso mali yabathengi basekhaya ibonisa ukuba iipesenti ezingama-88 zabo bonke abathengi bayayixhasa imali yokuthenga. Izinto ekubanjiswe ngazo zifika kuzo zonke iimilo nobungakanani, kukho iindlela ezahlukeneyo zokuxhasa imali ezifumanekayo. Zininzi izinto onokukhetha kuzo, enyanisweni, ukuba ujikeleze umhlaba wamanqaku obambiso akusoloko kulula. Ukuvela kwamanqaku obambiso lokudodobala koqoqosho ngo-2008 kwaba nefuthe elibanzi nelide kubanini bamakhaya. Uninzi lwabantu lwanyanzelwa ukuba luphume kumakhaya abo njengemfuneko yokuhlawulwa kweendleko zemihla ngemihla ezothulwe […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Ngamana 28, 2018 I-Singapore ngoku iPhezulu kuluhlu lwabatyali mali kwiCandelo leNdawo yaseMyanmar I-Singapore luqoqosho oluhlumayo eMzantsi-mpuma yeAsia kwaye yenye yezona ndawo zilula kwihlabathi ukuseta ishishini. Urhulumente wase-Singapore uxhasa kakhulu iiprojekthi zeshishini, ikakhulu ngamanyathelo anje ngemithetho kunye namanyathelo okuqhubela phambili. Kuyacaca ke ukuba ilizwe linemali eninzi yokutyala imali ngaphakathi nangaphandle. Ngaba ucinga ngokuthatha inxaxheba kwi-boanan yoqoqosho yase-Singapore ngokumisela ishishini lakho apho? […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Oktobha 18, 2016 Izinto ezi-5 zokuLumkela xa uthenga iPropathi yeBrexit IBrexit iphose amashishini amaninzi kumathandabuzo, kodwa into enye iqinisekile, amaxabiso endlu amiselwe ukuhla. Kubathengi bokuqala, eli inokuba lithuba elifanelekileyo lokutsiba kwinqanaba leepropathi, kodwa kukho izinto ezimbalwa ezingenakuthengiswa ngabathengi ekufuneka zijonge. Khangela iimpawu zokukhula ukuba ngaba imeko yethu iyehla kuqoqosho, oku kunokuthetha ukuncipha kwiindawo zasekhaya. Leya ndawo izayo intliziyo yakho icwangciselwe yona inokuphelela ekubeni yinto engazange ibekho, ngenxa yoko kubalulekile ukukhangela imiqondiso [yep] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Disemba 14, 2016 Izinto ezi-5 ekufuneka ziqwalaselwe Phambi kokuba uthenge iPropathi eIstanbul I-Istanbul yidolophu yobuhle, yokutya kunye nembali yengqondo. Esi sixeko singaqhelekanga siyeyona ndawo ithandwayo yokuhamba kwihlabathi liphela. Ukusuka kwindawo yayo edumileyo yokudlala emhlabeni ukuya kwizikhumbuzo zayo ezibalaseleyo, yonke into malunga nesi sixeko sine mesmerizing. Ukuba ucwangcisa ukuthenga ipropathi eIstanbul, uthatha isigqibo esibalulekileyo. I-Istanbul ibinomtsalane kubatyalomali bepropathi bamanye amazwe banikwe indawo ethembisayo, imozulu intle kunye noqoqosho lwentambo. Nangona kunjalo, […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Novemba 13, 2018 IziBonelelo ezi-6 zokuKwenza ukuba ube noTyalo-mali kwifama yeFama Ngaba ucwangcisa ukuseta indawo yokubuyela, ukudala iinkumbulo kunye nokuchitha ixesha nosapho? Mhlawumbi ujonge indawo oza kuyityala imali yakho ngaphandle kokukhathazeka malunga nelahleko emva kokunyuka kwamaxabiso. Ifama yintengiso emangalisayo yotyalo-mali. Oku kubonelela ngokudibeneyo kokubini ukubuyela kwintsapho kunye notyalo mali oluphambili. Unikezwe zizibonelelo ezi-6 zokwenza ukuba ube nemali kwi-fama. Ikhredithi yomfanekiso: urhulumenteauction.com Isibonelelo serhafu yepropathi luluvo oluhle ukufumana okanye ukugcina ipropathi yakho yezolimo […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba